यी हुन् साउथ फिल्मका महँगा ६ अभिनेत्री, कसको पारिश्रमिक कति ? - Nawalpur Dainik
April 14, 2021 April 14, 2021 by Nawalpur Dainik
साउथ इन्डस्ट्रीको टप टेन अभिनेत्रीमा काजलको नाम सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । हालै उनले बिजनेसम्यान गौतम किचलूसँग बिहे गरेकी हुन्। उनले तमिल, तेलुगु सहित हिन्दी फिल्ममा पनि काम गरिसकेकी छन्।
उनी आफ्नो एक फिल्मको लागि तीन करोड लिन्छिन्। बलिउडमा उनले अक्षय कुमार र अजय देवगन जस्ता हिरोसँग पनि अभिनय गरिसकेकी छन्
हंसिकाले हिन्दी फिल्ममा पनि काम गरेकी छन् तर उनले हिन्दी फिल्ममा सफलता पाईनन्। त्यसैले उनी अधिकतर तमिल र तेलुगु फिल्ममा धेरै काम गर्छिन्। उनले एक फिल्ममा काम गर्नको लागी १ करोडभन्दा बढी पारिश्रमिक लिन्छिन्। एजेन्सीको सहयोगमा
Prevतपाइको सास गन्हाएर हैरान हुनुन्छ? यस्ता छन् घरेलु उपचारहरू
Nextपूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडाका बाल्यकालका तस्विरहरु भाइरल (तस्बिरसहित )